China Easy ukubamba iqunube umoya freshener imoto, ikhaya kunye namagumbi abavelisi kunye nababoneleli | PENGWEI
Kulula ukubamba i-strawberry air freshener yemoto, ikhaya kunye namagumbi
Igama lemveliso: i-strawberry air freshener
Igama lebrand: Pearl/Pengwei/Customized
Iimpawu: Intsha, iswiti
Xa ucula kwaye usonwabela itheko, ivumba elimnandi lequnube liya kukwenza ube happy.Olu hlobo lwemveliso lufanelekile ngamaxesha amaninzi njengegumbi lokutyela, igumbi lokulala, igumbi lokufunda kunye nemoto yethu.
Inombolo yoMfanekiso OEM
Ukupakishwa kweyunithi Iplastiki + Ibhotile yeTin
Ithuba Ikhaya, amagumbi kunye neemoto
Umbala iikepusi ezityheli ezinetoti zokufunda
Ngaba ubukhulu D: 52mm, H: 128mm
Ukupakisha ubukhulu 51*38*18cm/ctn
Ukupakisha Iinkcukacha 48pcs/ctn
Ixesha lokuzisa 10-30 iintsuku
1. Hlaziya umoya wakho, wenze umoya wakho ukhululeke ngakumbi
2. Uyilo lokusingqongileyo
Amagumbi afana negumbi lokutyela, igumbi lokulala, igumbi lokufunda kunye nemoto yethu.
Okwangoku, eyona ndlela iqhelekileyo yokucoca indawo yomoya kwimoto kunye nokuphucula umgangatho womoya ikulungele ukuthwala, kulula ukuyisebenzisa kwaye ingabizi. Ukhetho oluMuitiple lweziqholo onokukhetha kuzo.
1. Isikhongozeli esicinezelekileyo, musa ukuvala umlilo okanye amanzi ashushu;
2. Nceda ugcinwe kwindawo epholileyo neyomileyo, kuphephe ukukhanya kwelanga;
3. Nceda usebenzise le mveliso kwindawo enomoya omhle. Ukuba utshizwe ngempazamo emehlweni, hlambulula ngokukhawuleza ngamanzi imizuzu eyi-15. Ukuba ukungakhululeki kuyaqhubeka, funa iingcebiso zonyango ngokukhawuleza;
4. Nceda ugcinwe apho abantwana bangafikeleli khona.
Ngaphambili: Umenzi ixabiso umoya freshener Qiaolvdao ikhaya kunye ofisi
Okulandelayo: Kushushu ukuthengisa ngetshokhwe yokutshiza emhlophe yengca, udonga, ukupeyinta ecaleni kwendlela
Imoto ye-Air Freshener
I-Air Freshener yeKhaya
I-Air Freshener Yendlu yangasese
Eyona moto iFreshener umoya
Imoto yoMoya yoMtsha
Isiko loMoya omtsha
I-Natural Air Freshener
Ixabiso lomvelisi lokuhlaziya umoya Qiaolvdao ukwenzela ...
Uyilo olumangalisayo lweempawu zakho zokuhlaziya umoya Qiaol...
I-Air Freshener ehlala ixesha elide itshiza i-250ml yeKhaya